मोदीको उपस्थितिमा आयोजित क्वाड बैठकमा चिनियाँ मिडियाले के भन्यो ? « News24 : Premium News Channel
मोदीको उपस्थितिमा आयोजित क्वाड बैठकमा चिनियाँ मिडियाले के भन्यो ?
एजेन्सी । क्वाड शिखर सम्मेलन अन्तर्गत अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाका नेताहरु शुक्रबार भेटे। यो क्वाड समूह देशको नेताहरुको पहिलो व्यक्तिगत बैठक थियो।
ग्लोबल टाइम्सले यो बैठकलाई चीनको सन्दर्भमा रेखांकित गरेको छ।ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, शुक्रवार क्वाड देशहरु चीनलाई ुरोक्नु आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न वाशिंगटनमा भेला भएका थिए।
तर विज्ञहरुका अनुसार बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले आफ्नो अनुवाद उपकरणमा खराबी भएको गुनासो गरे। यो उदीयमान चीन विरोधी गुटको भविष्यको सूचक पनि थियो। अमेरिकाको घट्दो क्षमता र विश्वव्यापी परिस्थितिमा आएको परिवर्तनका कारण यो चीन विरोधी समूह कुनै पनि हिसाबले प्रभावकारी साबित नहुने जनाइएको छ।
वासिंटन पोस्टको रिपोर्ट अनुसार शुक्रवार आयोजित क्वाड देशहरुको यो बैठकको घोषणामा, मुख्य रूपमा खोप, जलवायु, प्राविधिक र अन्तरिक्ष सहयोगसहित अन्य मुद्दाहरु उल्लेख गरिएको थियो। पत्रकारहरुले चीन वा बेइजि जस्ता शब्दहरु सुनेनन्, तर क्वाड चीन, समूहको एजेन्डाको सबटेक्स्ट थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले भने, ‘क्वाड समूहका देश ,जलवायु र उदीयमान टेक्नोलोजीको लागि कोभिडको चुनौतिहरुसंग सम्बन्धित प्रमुख चुनौतिहरुलाई सामना गर्नको लागि एक मंचमा आएका छन्,।
उनले बैठकको सुरुमा भने, ‘हामी जान्दछौं कि कसरी हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसका लागि हामी हरेक चुनौतीको लागि तयार छौं।’
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले वाइडेनको टिप्पणी दोहोर्याउँदै भने, ‘हामी एक स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वास गर्छौं किनकि यो एक बलियो, स्थिर र समृद्ध क्षेत्र हो।’
जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनले भने, ‘क्वाड एक धेरै महत्वपूर्णू चार देशहरुको पहल हो जो साझा आधारभूत मूल्यहरुलाई साझा गर्दछ र कानूनको शासनमा आधारित हिन्द प्रशान्तमा एक स्वतन्त्र र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको लागि सहयोग गर्नको लागि सहयोग गर्दछ।’
चीन विदेश मामिला विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थानको प्रोफेसर ली हैडोंगेले, ग्लोबल टाइम्सलाई भने, ‘यद्यपि यी चार देशहरुका नेताहरु चीनको बारेमा केहि बोलेनन्, न त उनीहरुलाई स्पष्ट रूपमा चीनसंग वर्तमान गतिरोधको उल्लेख गरे, तर यो शिखर सम्मेलन सम्मेलनको एजेन्डा चीनमा केन्द्रित थियो। यो विशेष गरी पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोगको ब्यानर अन्तर्गत विवाद र द्वन्द्वहरुलाई बढाउने उद्देश्यले एक पहल हो।’
उनले भने, ‘खोपको आपूर्तिमा सहयोग र महामारीसंग लड्न उपायहरुको आडमा, अमेरिकासहित क्वाडको अन्य तीन देशहरु, आफ्नो वास्तविक उद्देश्य लुकाउन चाहन्छन्।’
यसो गरेर उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न खोज्छन्, तर चीन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्तो तल्लो स्तरको रणनीति देखेका छन्।
लीका अनुसार, अमेरिका क्वाडको चार सदस्यहरुको बीच एकता र समन्वय देखाउन चाहन्छ किनकि यो चीनसंग प्रतिस्पर्धा बढाउन खोज्छ।
‘चीन र अमेरिकाबीच पहिले नै तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा छ। यस्तो स्थितिमा वाइडेन चीनसँग टकरावबाट बच्न चाहन्छन् र चीनविरूद्ध उक्साहट लिइरहेका छन्। तर तथ्य यो हो कि उनी नाजुक स्थितिलाई सम्हालिरहेका छन्,’ लीले भने। ।
अमेरिकी मिडियाका अनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन पनि चार देशका नेताहरु बीचको यो बैठकमा भाग लिए।
सिन्हुआ युनिभर्सिटीका अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा फेलो सन चेन्घाओले ग्लोबल टाइम्सलाई भने कि चीनको अनुपस्थितिले पनि क्वाड देशहरु बीचको अवरोध झल्काउँछ।
ती सबै देशहरु चीनको उदय नचाहेको समान विचार हुन सक्छ, तर चीनको लागि उनीहरुको नीति एक अर्काबाट फरक हुन सक्छ।
जे होस् शिखर सम्मेलन धेरै फलदायीको रूपमा वर्णन गरिएको थियो, बैठकको दौरान, जो वाइडेनले आफ्नो एक कर्मचारीलाई भने कि उनको अनुवादक उपकरण काम गरिरहेको थिएन। उनले यो माइकमा भने, जुन अन्य नेताहरुले सुने।
सुनका अनुसार, क्वाड शिखर सम्मेलन वाइडेन प्रशासनको पछिल्लो कदम हो तर बिभिन्न सहयोगीहरुसंग, बिभिन्न गठबन्धनले राम्रोसंग काम गर्दैन किनकि अमेरिका केन्द्रित छैन। यसले उसका सहयोगीहरुबीच असन्तुष्टि पनि बढाएको छ।
क्वाड शिखर सम्मेलन भन्दा पहिले नै, अमेरिकाले ब्रिटेन र अष्ट्रेलियासंग औकस सम्झौता घोषणा गरेको थियो। यस विषयमा फ्रान्सले असन्तुष्टि जनायो र यी सहयोगी देशहरुबाट आफ्ना राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलायो।
विश्लेषकहरु भन्छन् कि आकसले क्वाड शिखर सम्मेलनलाई प्रभावित गरेको छ किनकि जापान र भारत आकस मा साझेदार छैनन्, जबकि अष्ट्रेलिया छ।